ရန်ကုန်မြို့ ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် COVIDလူနာများ ရှိနေပြီဟု ပရဟိတအသင်းများပြော - Myanmar Pressphoto Agency
ရန်ကုန်မြို့ ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် COVIDလူနာများ ရှိနေပြီဟု ပရဟိတအသင်းများပြော
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်အားလုံး၏ ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် COVID အတည်ပြုလူနာများ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ ပရဟိတအသင်း တချို့ထံမှ သိရသည်။
“ကူညီနေတဲ့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ဖျားနေကြပြီ။ ကားမောင်းပေးဖို့တောင် လူရှာရ ခက်နေပြီ။ ပြည်သူတွေက စစ်ကောင်စီ ကျန်းမာရေးဌာနကို သွားရမယ့်အစား အသေသာခံနေကြပြီ” ဟု တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပရဟိတ အဖွဲ့တခုမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့သည် လူဦးရေ သိပ်သည်းထူထပ်စွာ နေထိုင်ကြသဖြင့် ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့လွယ်သကဲ့သို့ပင် ရပ်ကွက်တိုင်းနီးပါး Home ကွာရန်တင်းအိမ်များ ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း အသက်ရှူကျပ်သည့်လူနာများ များပြားလာသဖြင့် အောက်စီဂျင်ရှာဖွေမှုများပြားခဲ့ပြီး ပြတ်လပ်သည်အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြို့တွင်း မြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် ဖျားသော လူနာများ ရှိနေကြောင်း သိရသည့်အပြင် မြို့ပြင်ရှိ မြို့နယ်များရှိ ကျေးရွာများတွင်ပါ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသည့် လူနာများ ရှိနေကြောင်း မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ပရဟိတ အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကူးစက်မှုဆိုးရွားစွာ များပြားနေသကဲ့သို့ သေဆုံးနေသည့် အရေအတွက်သည်လည်း စစ်ကောင်စီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် များစွာ ကွာဟနေကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် ကိုဗစ်ရောဂါအား ထိန်း ချုပ်နိုင်ရန် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့ထိ ၉ရက်ကြာ ရုံးပိတ်ရက်ရှည် ကြေငြာထားပြီး မိမိအိမ်တွင်နေထိုင်ရန်နှင့် မလိုအပ်ဘဲအပြင်ထွက် လျှင်အရေးယူမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
#ရန်ကုန်မြို့ #COVID19 #ကူးစက်မှုမြင့်တက် #သေဆုံးမှုများ #MPA
Charity Organizations Say COVID-19 Patients in Every Neighborhood in Yangon
Every neighborhood of all townships of Yangon has COVID-19 patients, some charity organizations have said.
“Even us (helpers) are getting sick. It’s not easy to even findadriver. The people would rather die than go to the junta’s healthcare,” saidaSouth Dagon-based charity organization official.
As Yangon is highly crowded, it’s very easy to spread and there are homes under home quarantine now in almost every single neighborhood.
In recent days in Yangon, patients with respiratory issues have increased so much that there were oxygen shortages. There are people who suffer from sickness in every quarter in townships within Yangon and there have also been people outside Yangon who died from COVID-19,acharity organization member in Hmawbi said.
As the infections are rocketing, there is alsoahuge gap in the number of deaths between what the military reports and the true numbers.
The SAC has declaredanine-day long holiday from July 17 to 25 in an effort to control the infections and those who go out necessarily will be seriously punished.
Tags: Covid_19 MPA Myannmar News
Previous: စစ်ကောင်စီ၏ COVID-19 အတွက် အလှူခံငွေ တစ်ပတ်အတွင်း တစ်သိန်းကျပ်သာ ရရှိ
Next: ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် အတွင်း စစ်သား ၅၀ ခန့် COVID-19 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီး ၂ ဦးသေဆုံး